सुनसरी । उदयपुर ठोक्सीलाकी ३८ वर्षीया कृष्णकुमारी कटुवालको हत्या आरोपमा प्रहरीले एक युवालाई प्रक्राउ गरेको छ । उनको गत सोमवार हत्या भएको थियो ।
महिला बेचेको आरोपमा २६ वर्षपछि गिरफ्तार
नुवाकोट । मानव बेचबिखन गरेको आरोपमा मनकामनाका धन वहादुर तामाङलाई प्रहरीले २६ वर्षपछि पक्राउ गरेको छ । नुवाकोट फिकुरीकी २५ वर्षीया युवतीलाई २६ वर्षअघि भारतमा लगेर बेचेको आरोपमा मनकामनाका ४४ वर्षीय रौत भनिने धनबहादुर तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
महिलालाई होटलमा बन्धक बनाउने तीनजना पक्राउ
सुनसरी । महिलालाई होटलमा बन्धक बनाउने तीन जनालाई झापा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका हलगाडा बस्ने होटल सञ्चालक मनिष कार्की, मोरङको बविया विर्ता–९ बस्ने दीपक ऋषिदेव र ललितपुर उपमहानगरपालिका –१४ बस्ने दीपक कार्की रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
मध्यपश्चिमबाट एक वर्षमा ४ सय १० महिला हराए
नेपालगन्ज । १ वर्षमा मध्यपश्चिमका विभिन्न जिल्लाबाट ४ सय १० जना महिला हराएका छन् । उनीहरू बेचविखनमा परेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
सूचनाको पहुँच नहुँदा महिलामाथि हिंसा : आयुक्त
काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त किरण पोखरेलले महिला सुसुचित भएमात्र पुरूष र अन्य परिवारले लाभ लिन सक्ने हुँदा सूचनाको हकका बारेमा महिलालाई जानकारी गराउँन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
एकल महिलाको सांस्कृतिक र धार्मिक अधिकार सुरक्षित गर : सञ्जाल
नेपालगन्ज । द्वन्द्व पीडित तथा एकल महिला सञ्जाल बाँकेका अध्यक्ष एकमाया बिकले एकल महिलाको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक अधिकारलाई सुरक्षित र मर्यादित गराउन माग गर्नु भएकाे छ ।
नेपालगन्ज, पुस १३। बाँकेको बेलभार गाबिसको भैयापुरमा बालविवाहविरुद्धको अभियानमा क्रियाशिल रहँदै आएका बाल क्लबका पदाधिकारीले नै विवाह गरेका छन्। शनिबार स्थानीय बिहानी युवा क्लबको अगुवाइमा विवाह रोकिएको छ।
« Previous 1 … 259 260 261 262 263 … 294 Next »
संवाददाताको आवश्यकता !!!!
कतै किशाेरीमाथि बिद्यालयमा दुर्व्यवहार भइरहेकाे त छैन ? तलकाे लिंकमा गएर तपाइकाे विचार राख्नुहाेस ।
३३ प्रतिशतको शब्दजाल
अहिलेसम्म प्रतिशत नै तोकेर सहभागिताको टुंगो लगाइए पनि किन कार्यान्वयन हुँदैन ? आखिर महिला के
यस्ता घरेलु हिंसा मिलापत्र गर्न मिल्दैन
–शशी बस्नेत– घरेलु हिंसा मात्र हैन कुनै पनि लैंगिक हिंसामा प्रहरी proactive छैन । कुनै पनि